स्वास्थ्य पेज » मह के वास्तवमै प्रकृतिको अमूल्य उपहार हो ? मह के वास्तवमै प्रकृतिको अमूल्य उपहार हो ? – स्वास्थ्य पेज
सुरुमा माहुरीले फूलबाट जम्मा गरेको रस चिनी हुन्छ । तर, चाकामा एकत्रित गरेपछि त्यसमा रासायनिक परिवर्तन हुन्छ । अन्ततः यही प्रक्रियाबाट त्यसमा केवल १ दशमलव ९ प्रतिशत मात्र सुगर बाँकी रहन्छ । महमा २० प्रतिशत पानीका साथै ७६ प्रतिशत आयरन, फस्फोरस, क्याल्सियम, सोडियम, म्याग्निज, मिनरल्स आदि हुन्छ ।